Wararka - Shaandhaynta is -nadiifinta otomaatiga ah waxay u doodaysaa nabadda cagaaran
Guriyeynta Shaandhada Bacaha
Gelinta Filter -ka Boorsada Sare
Gelinta Shaandhada Gelida Side
Guriyeynta Shaandhada Bacaha Dhaqaalaha
Guriye Filter Boorsada PP
V-haysa Degdegga Furiyeyaasha Bacaha Badan leh ee Degdegga ah
Guriyeynta Shaandhaynta Bacaha Badan ee Davit Arm
Guryaha Shaandhaynta Bacaha Badan leh ee Guga
Boorsada Shaandhada PO
Bacda Filter -ka PE
Bacda Shaandhada POXL
Bacda Filter ee PEXL
Boorsada Filter -ka ee Nylon Monofilament
Bacda Shaandhaynta PTFE
Bacda Filter ee la qiimeeyay
Bacda Adsorption Saliidda
Bacda Filter Karti Sare
LCR-100 Taxanaha Bacda Shaandhada
LCR-500 Taxanaha Bacda Shaandhada
BagF Filter Taxanaha AGF
Bag Filter Taxanaha PGF
MAXPONG Boorsada Shaandhada
Kaydadka Filer Vessel
Doontii Kaydadka Kaydka Fudud
Doon culus oo Badan oo Kaydadka Cidhiidhiga ah
Nidaamka Shaandhaynta Is-nadiifinta
Shaandhaynta is -nadiifinta otomaatiga ah waxay u ololaysaa nabadda cagaaran
Markay noqoto cagaar, dadka badankiisu waxay ka fikiraan mawduucyo cad sida dabeecadda iyo ilaalinta deegaanka. Cagaarku wuxuu macnaha nolosha ku leeyahay dhaqanka Shiinaha, sidoo kale wuxuu astaan ​​u yahay dheelitirka deegaanka deegaanka.
Si kastaba ha ahaatee, horumarka joogtada ah ee warshadaha, cagaarku wuxuu hoos ugu dhacayaa xawaare sare. Hadday tahay kaymo cagaaran, boodh aad u weyn ama wabiyaal iyo harooyin ruxmaya, wasakhaynta wasakhda warshaduhu way sii yaraanaysaa sannadba sannadka ka dambeeya. Astaanta nolosha aadanaha iyo dhulka ayaa ka soo gudubtay cagaar ilaa madow. Shaandhaynta is-nadiifinta otomaatiga ah, oo si weyn loo ammaanay qalabka ilaalinta deegaanka cagaaran, mar la bilaabay, waxay umuuqataa inay ku durto xoog cusub bulshada dhexdeeda.
Iyada oo ay sii xumaanayso wasakhaynta deegaanka, waaxaha ilaalinta deegaanka ee khuseeya Shiinaha ayaa si tartiib tartiib ah u bilaabay inay fiiro gaar ah u yeeshaan dhibaatooyinka deegaanka. Dhanka kale, xeerarka iyo xeerarka ilaalinta deegaanka ayaa si joogto ah loo soo saaraa si loo ilaaliyo bay'ada iyo wabiyada si aanay mar dambe u dhaawacmin. Xeerarka iyo qawaaniinta kaliya uma shaqeeyaan dadka qaarkood wacyigelin sharci oo liidata; Markii la bilaabay shaandhaynta is-nadiifinta si otomaatig ah, dad aad u badan ayaa ka warqaba ilaalinta deegaanka waxayna ku biiraan darajooyinka xakamaynta wasakhda. Shaandheyn is-nadiifin otomaatig ah ayaa suuqa lagu hormariyay tan iyo markaas.
Sababta shaandhaynta is-nadiifinta otomaatiga ah u kiciso wacyiga dadka ee ilaalinta deegaanka ayaa ah inay ku gaadhay natiijooyin badan xakamaynta wasakhda, dhimista qiiqa iyo keydinta tamarta.
In kasta oo shaandhaynta is-nadiifinta si otomaatig ah ay u tahay qalab sifeynta ilaha biyaha, haddana saamayntiisu waxay u keentaa faa'iidooyin dhinacyo badan. Qaado isticmaalka shaandhaynta is-nadiifinta otomaatiga ah tusaale ahaan. Warshadda waraaqaha waxaa loo aqoonsaday inay tahay isticmaale biyo weyn. Kahor intaan la isticmaalin shaandhaynta is-nadiifinta oo si otomaatig ah u ah, si loogu helo faa iido degdeg ah oo gaaban, warshaddu waxay si toos ah u daadisaa qashin badan oo wasakh ah daaweyn la'aan, taas oo keenta wasakhda webiga ee deegaan oo kala duwan. Ka dib marka la isticmaalo shaandhaynta is-nadiifinta otomaatiga ah, waxay si toos ah u yareyn kartaa wasakhda wasakhda ee dabeecadda, iyo tayada biyaha la sifeeyay ayaa sidoo kale la siin karaa warshadda si dib loogu isticmaalo, taasoo si weyn u yaraynaysa maalgashiga qaadashada biyaha. Maxaad u samayn wershadda.
Shaandhaynta tooska ah ee is-nadiifinta ayaa la mid ah sifayn, kaas oo kala soocaya dhammaan nijaasta qallafsan ee bullaacadaha, oo na siisa meeraha cagaaran.
Waqtiga dhejinta: Jun-08-2021
No. 85, Wadada Kanggong, Degmada Qingpu, Shanghai 201714, PRChina